Maxaa Ka Xiiso Badan In Ajay Devgn Iyo Tabu Markale Mashruuc Cusub Wada Sameyn Doonaan - Hablaha Media Network
Maxaa Ka Xiiso Badan In Ajay Devgn Iyo Tabu Markale Mashruuc Cusub Wada Sameyn Doonaan
HMN:- Bilawgii bishii Febraayo ee sanadkaan Director Luv Ranjan oo caan ku ah sameynta filimka Pyaar Ka Punchnama ayaa shaaca ka qaaday in filimkiisa xiga oo ah jaceylka reer magaalada Ajay Devgn hogaamiye ka noqon doono.
Haatan filimkan aan magaca loo bixin waxaa Ajay Devgn la sameyn doonto atirishada ay saaxiibka dhow wada yihiin sidoo kalena sanado badan ay shaqo qurux badan isla soo qabteen qof kale ma ahan waa Tabu.
Laakiin Director Luv Ranjan wuxuu sheegay in Ajay iyo Tabu filimkaan lamaane ku matali doonin ama jaceyl shaashada ku wadaagi doonin waxayna xidigtaan filimkaan ku leedahay door xiiso badan.
Director Luv Ranjan wuxuu sheegay atirisho kale oo caan ah filimkaan jaceylka reer magaalka iyo shactirada isku jiro ah lagu soo dari doono si ay Ajay Devgn jaceyl shaashada kula matasho.
Filimkaan aam magaca loo bixinin dhamaadka sanadkaan ayaa duubis lagu bilaabi doonaa waa filim Ajay waji cusub ku matali doono jili doono nin dhalin yar oo aan masuuliyad badan is saarin dhanka nolosha.
Ajay iyo Tabu haatan waxay ka wada shaqeenayaan filimka Golmaal Again oo la daawan doono Diwali 2017 oo ku beegan 19-ka October ee sanadkaan.